बाबुको मुख हेर्नेदिनमा परदेशी छोरीको सम्झना – Sadarline
नयाँ दिल्लीमा बम विष्फोट, सुरक्षा सतर्कता बढाइयो
अब घर मै बसि क्लियर टिभीको मुभी अन डिमाण्डबाट बिभिन्न फिल्म हेर्न सकिने
सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन
विश्कै सबैभन्दा मोटो बच्चाः उमेर १० वर्ष, १९२ किलो तौल
खजुरा गाउँपालिका वडा नं. १ वालविवाहमुक्त घोषणा
अन्तराष्ट्रिय स्तरको नृत्य प्रतियोगीताको अडिसन हुँदै
बाबुको मुख हेर्नेदिनमा परदेशी छोरीको सम्झना
१६ भाद्र २०७३, बिहीबार ०९:११
आज कुशे औंसी अर्थात बुबाको मुख हेर्ने दिन । सनातन हिन्दू धर्म अनुशार कुशे औंसी परम्परामा भाद्र महिनाको अमावस्या (औंसी)का दिन मनाइने पर्व हो । कुशे औँसीमा बुबाको मुखहेर्ने, अर्थात् बुवा दिवसको रूपमा मनाई बुवालाई विशेष सम्मान गर्ने चलन रहेको छ । त्यस्तैगरी आमाबाबु नहुनेले पवित्र तिर्थ स्थलहरुमा बिषेश गरी गोकर्ण र विष्णुपादुकामा श्राद्ध, तर्पण ,दान , पुण्यगरी पितृ तार्ने र आफू पुण्यात्मा बन्ने विश्वास गरिन्छ ।
अर्कोतिर हिन्दू संस्कारमा कुशको विशेष प्रकारको महत्व रहेको छ । कुशको औँठी जसलाई पवित्र भनिन्छ त्यो धारण नगरी कुनै पनि धर्मिक कार्य गरिँदैन त्यसकारण आजको दिनलाई कुशे औंसी भनेर पनि भनिएको हो । बुबा अर्थात जन्मदाता सबैले आफ्नो आफ्नो भाषा अनुसार सम्बोधन गरिन्छ । म मेरो जन्मदातालाई (पापा)भनेर सम्बोधन गर्छु । पापा म हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चहान्छु । हजुरलाई सम्झनको लागि आजको दिन कुरेर बस्नु त पर्दैन तर, पनि आज कै दिन लेख्न मन लाग्यो २–४ शब्दहरु ।
म जन्मेको दिन सबै भन्दा धेरै खुसि हजुर हुनु भएको थियो र म हजुर कि पहिलो सन्तान मैले जति माया, स्याहार सुसार साएदै मेरा भाई बैनीले पाएनन् होला । आजभोली म कहिले काहि सोच्छु हजुरको त्याग समर्पण अनी हामी प्रतिको माया र ममता मुटु पोलेर आउछ मनमा आगोको राको फैलन्छ अनी आखाको माध्यमबाट आसुको रुपमा बाहिरिन्छ । हो पापा साच्चै नै हजुरले हाम्रा निम्ति गर्नु भएको मेहेनत र संघर्षसंग तुलना गर्ने कुनै बस्तु कुनै शब्द केहि भेटिन मैले ।
आफ्नो ईमान्दारीताले अहिलेसम्म सानले बाचेका हामी हजुरलाई केहि दिन सकेनौ । खै हजुरको मन कतिको खुसि पारेकि छु त्यो त मलाई थाह भएन तर मेरो कारणले हजुरको मनमा ठेस पुगेको छ भने, जानेर होस या अन्जानमा चित्त दुखाएकी छु भने अबोध छोरीले गरेको गल्ति सम्झेर माफि दिनु है । आज पनि मलाई याद छ ति पुराना दिनहरु जुन दिन कति दुखका थिए कति चुनौतीपुर्ण थिय तर, ति सबै चुनौतीहरु आफुले नै सामना गरि यहा यो स्थानसम्म आउन सफल हुनु भयो । हामीलाई त्यस्ता दुख र पीडाबाट टाढै राखी आफुमात्र सहनु भयो । बाहिर साथीहरुसग बसेर समय बिताउन भन्दा घरमै आफ्ना परिवारलाई समय दिने हजुरको सोचलाई म सलाम गर्न चहान्छु ।
पापा हजुरले भन्नु भएका धेरै कुराहरु मध्य जहिले म हजुरको यो कुरा सम्झन्छु ‘अरुहरुको सम्पति घर, जग्गा , बैंक ब्यालेन्स होला तर मेरो सम्पति भनेका मेरा छोराछोरि तिमिहरु हौ’ अनि मनमा घमण्ड जागेर आउछ कि कति माया गर्ने पापा पाएका छौ हामिहरुले । जीवनको यात्राको हरेक पाईला चाल्नेक्रममा कतै लड्खराएर लड्न लागे भने हजुरको मुहार सम्झन्छु अनि हजुरको संघर्षको यात्रा सम्झन्छु अनि समाल्छु आफुले आफैलाई ।
हजुरले दिनुभएको संस्कार, ज्ञान, शिक्षा ले गर्दा नै आज यहा सम्म आउने आत्मबल जागेको छ । केहि गर्छु भन्ने मनोबल जागेको छ । मानिस भगवानको पुजा अनि दर्शन गर्न मठ मन्दिर धाउछन तर म आफुलाई हेरेर मुस्कुराउछु कारण म मा हजुरको रुप हजुरको छाया पाउछु । हजुरको र मेरो अनुहार उस्तै छ रे हजुर लाई याद छ हामि पर्वत जादा बाटोमा भेटिनु भएका सबैले के भन्नु भाको थियो ‘य आमै नि बाउलाई लुकाएर छोरी देखाए हुनी, य कती उस्तै हो मोहोडा, ठ्याक्कै बाउ’ हो म हजुर जस्तै छु ठ्याक्कै बानि ब्यहार ज्युडाल सबै हजुर कै । गर्व छ म हजुरकी छोरि हु । जिवनमा हजुरलाई सुख दिन सकुला नसकुला तर हजुरलाई सिर निउराएर हिड्नु पर्ने दिन कहिले आउन दिने छैन यो मेरो बाचा भयो हजुरलाई । एक दिन यस्तो दिन ल्याउने छु मलाई देखाएर हजुरले भन्नु हुने छ ‘उ त्यो सुष्मा ! त्यो मेरी छोरी हो मेरो ईज्जत अनि मान हो त्यो दिन ढिलो चाडो होला तर अवश्य आउनेछ यो मेरो प्रण भयो ।’ तर, आजको दिन म टाढा छु तपाई संग प्रत्यक्ष भेट हुँदैन यसै विलौनाको माध्यमबाट सम्झन चाहान्छु ।
आजको दिन अरुका छोराछोरीले झै नयाँ लुगा, टन्न फलफुल, मिठाई लड्डु हजुरको अगाडि टक्रयाउन नसके पनि हजुरको बिश्वास र भरोसा कहिले तोड्ने छैन । त्यो आखामा लाज र सरमको आशु कहिले बग्न दिने छैन भन्ने प्रणभयो मेरो । आजसम्म मेरा हरेक ईच्छा चाहाना पुरा गर्नु भएको , मेरो हरेक पाईलामा साथ दिनु भएको छ जसको लागि म हजुरको पाउमा मेरो सिर राखि धन्यवाद चढाउन चहान्छु । हुन त छोरीले बाउको पाउ छुन हुन्न भन्ने हाम्रो सस्कारले त्यो गर्न नदिय पनि मनदेखि सम्मान गर्छु पापा । म भन्न चाहान्छु कि यो संसारमा मैले धेरै माया हजुरलाई गर्छु । हजुर मेरो गुरु , मेरो भगवान, मेरो खुसी, मेरो जिन्दगि हजुर नै ।
धम्बोझी चोकको पूर्वराजा वीरेन्द्रको शालिक मध्यरातमा हटाईयो
सदरलाइनडटकम १७, भदौ नेपालगन्ज : नेपालगन्जको धम्बोझीचोकमा बिहीबार राखिएको पूर्व राजा वीरेन्द्रको अर्धकदको शालिक स्थानीय प्रशासनले हटाएको छ । चोकमा रहेको झण्डा फेर्ने बाहानामा राप्रपा नेपाल निकट राष्ट्रबादी युवा समूहद्वारा बिहीबार बिहान करिव साढे ९ बजे सो शालिक राखेका थिए । शुक्रबार बिहान करिव दुईबजेतिर स्थानीय प्रशासनले सो शालिक हटाएको […]
७ भाद्र २०७३, मंगलवार १२:५६
नेपालगन्जलाई आर्थिक विकासको केन्द्र बनाउने हाम्रो प्रमुख एजेण्डा
६ फाल्गुन २०७३, शुक्रबार ०९:३१
‘बिद्यार्थी निर्वाचन : ‘लडाईं र पढाई’
४ पुष २०७४, मंगलवार १२:३९
बहसमा नेपालगन्ज प्रदेश नं.५ को राजधानी
१३ चैत्र २०७५, बुधबार १८:३०
नमिलेको जोडीलाई खेलकुदले मिलाउँछ : पूर्वमन्त्री श्रीपाइली
७ भाद्र २०७४, बुधबार १८:४५
१२ मंसिर २०७४, मंगलवार ०७:५०
गुल्मीमा काँग्रेसका उम्मेदवार चन्द्र भण्डारी पछाडि हुनुका कारण यी हुन